Lifeline ( 1997 ) - Myanmar Asian TV
1997 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Lifeline ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်….
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဟောင်ကောင်ရဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sean Lau က မီးသတ်သမား ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ထားပါတယ်….
သူက မီးသတ်သမား ဘ၀နဲ့ စွန့်စားရတာကို သဘောကြတဲ့သူ တစ်ယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆရာဝန်မလေး Carman Lee နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်….
မီးသတ်သမားဆိုတဲ့အတိုင်း Tsuen Wan ဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ အဆင့် ၅ ရှိတဲ့ မီးလောင်မှု တစ်ခုကို သူတို့တွေ ဘယ်လို အသတ်စွန့်ပြီး မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့တယ်….
ဘယ်လို စွန့်လွတ်စွန့်စားသွားခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကို ခံစားကြည့်ကြပါအုံးခင်ဗျာ…..
Rating အရ ကြည့်မယ်ဆိုလဲ IMDb မှာ 6.7/10 နှင့် Rotten Tomatoes မှာ 70% ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Translator : Soe Min Thant & Nyein Min Thaw
Actors: Alex Fong, Carman Lee, Ching Wan Lau
Openload.co Myanmar 402 MB Download Soliddrive.co Myanmar 402 MB Download